Archive du 20181012
Manome toky i Dada “Atao mahamay izay mikasikasika ny Malagasy”
Ny faritra avaratra andrefan’ny nosy dia tany Antsohihy, Bealalana, Befandriana Avaratra, Analalava no nanohizan’ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana
Vondron’ireo kandida 22 Hitarika vahoaka hidina an-dalambe anio…
Nivory teny amin’ny trano fonenan’ny Amiraly Didier Ratsiraka ireo kandida manakiana ny fikarakarana ny fifidianana omaly. Nivoitra tao ny fitakiana ny fanamboarana ny firafitry ny mpikamban’ny HCC, ny CENI ary ny governemanta.
Fikambanana tsy manao politika Nitory ny filohan`ny HCC
Tapitra ny 12 ora omaly nomen`ireo fikambanana tsy manao politika samihafa mitaky ny fialan`ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Jean Eric Rakotoarisoa,
Mpiasam-panjakana manao propagandy Tsy voafehin`ny praiminisitra intsony ny olony
Efa tsy misy intsony ny fanjakana tan-dalàna fa manitsakitsaka ny lalàna velona misy eto amintsika ireo olona ambony eto amin`ny firenena.
Dany Rakotoson “Soa ho antsika izao mitranga izao !”
Tonga ankehitriny ny fotoana ahafahana miteny, hoy ny filohan’ny antoko Aba, Dany Rakotoson. Rehefa tsy misy ny herisetra dia mety izay.
Filoham-pirenena vaovao Mafy ny ady miandry azy
Ny 25 janoary 2019 no tetiandro voafaritra ao anatin`ny lalàmpanorenana andraisan`ny filohan`ny Repoblika vaovao ny fitantanana ny firenena.
Fanokafana ny lisi-pifidianana Ho voatsipaka ambavafo ireo kandida 22
Rehefa nisokatra ny fampielezan-kevitra tamin’ny alatsinainy 8 oktobra teo, dia niaraha-nahita ny famondronan-kerin’ny kandida misia 22 tsy mankasitraka ny fomba fikarakarana ny fifidianana, ary anisan’ny takian’izy ireo ny fanokafana indray ny lisi-pifidianana.
Governemanta Mikorontana tanteraka
Araka ny loharanom-baovao voaray iray dia re fa hoe mikorontana tanteraka ny governemanta tarihan`ny praiministra Ntsay Christian amin’izao fotoana.
Fifidianana filoham-pirenena Zo sy adidy no mifidy
Amin`izao ankatoky ny fifidianana izao, tsara no manamarika fa zo sy adidy no mifidy. Amin`ny maha zo azy, ny olona voasazy ihany no tsy mahazo mifidy na olona izay heverina fa tsy manana fahefana ara-tsaina hanao an`izay.
Gédéon Rajaonson “Mpitondra hanompo ny vahoaka no ilaina”
Fadiranovana ny vahoaka ary efa tena latsaka ambany dia ambany ny faripiainany.
KMMR , KMD ary TIM Taolagnaro Vonona hampandany an'i Dada
Efa manana ny paikady matotra hampandaniana an'i Dada Ravalomanana ireo toko telo mahamasa-nahandro ao Tolagnaro dia ny TIM, ny KMMR ary ny KMD (kominina manohana an'i Dada).
Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara Hikarakara hetsika hihaonan’ny fiarahamonina
Etsy amin’ny tanàna Voahary Andohatapenaka ny 1 ka hatramin’ny 3 novambra izao no hikarakaran-dry zareo avy eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny andiany voalohany amin’ny hetsika antsoina hoe « Haona fi ».
Baolina vehivavy sokajy U 16 Ny Asot Analamanga no tafavoaka ho mpandresy voalohany
Nosokafana ofisialy tetsy amin’ny kianjan’Alarobia omaly alakamisy 11 oktobra ny fifaninanana baolina kitra vehivavy “Tournoi National U 16” karakarain’ny
Basket Alley Hoop 15 taonan’ny RDJ 96.6 fm Natolotry ny tale jeneraly ny lokan’ireo nandresy
Natolotry ny tale jeneralin’ny radio RDJ fm 96.6, Tahiana Rasolojaona « Jaytax »,
Ekipan’ny SCB Rugby Notoloran’ny Za ‘Gasy godasy sy television maromaro
Tao anatin’ny lanonana tsotra dia tsotra notontosaina teny amin’ny kianjan’i Betongolo ny alarobia 10 oktobra teo no nanoloran’ny fikambanana Za’Gasy Godasy sy televiziona ecran plat maromaro ho an'ny kliobana rugby SCB “Sporting Club de Besarety”.
Tsy sahy sy matahotra ve e ?
Miroso hatrany ny fanaovana propagandy sy ny propavandy. Misoko mangina ihany koa ireo kandida tsy mankasitraka fifidianana noho ny fomba nikarakarana azy,
Association des libraires de Madagascar Miezaka manome lanja hatrany ny vaky boky
Miezaka manome lanja hatrany ny vaky boky ny “Association des librairies de Madagascar”.
Faritra ivelan’ny tanàn-dehibe Hampilalaovin’ny Métatron production sarimihetsika
Raikitra nanomboka ny faran’ny herinandro teo ny tetikasa famokarana raki-tsary sy raki-peo amin’ny toerana mivoaka ny tanàn-dehibe napetraky ny Métatron Production ao Mahitsy.
NAMPANGAINA HO JIOLAHY
Mbola nangalana vola mitentina 600.000 ariary ihany ny havan’ny maty tao Toamasina. Io lehilahy izay notifirina io dia nolazaina fa jiolahy.
Etsy amin’ny Fatapera Antaninarenina no fotoana miaraka amin’i Olombelo Ricky ao anatin’ilay fampisehoana takariva nampitondrainy ny lohateny hoe « Eo amorom-parihy ! » anio alina.
Fikambanan’ny Frankofonia Ho fantatra anio ny sekretera jeneraly vaovao
Nosokafana tamin`ny fomba ofisialy omaly, any Erevan, renivohitry ny Repoblikan’i Armenia ny fihaonan’ireo Filoham-pirenena na filoham-panjankana mikambana ao amin’ny Vondrona iraisam-pirenena ny Frankofonia (OIF).
Ora fanariana fako eto an-drenivohitra Manomboka amin’ny 5 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina
Betsaka ireo olona tsy mahafantatra ny ora fanariana fako eto an-drenivohitra, hany ka manatanteraka izany amin’ny fotoana tsy tokony hanaovana azy.
Boriborintany fahatelo Hahazo fotodrafitrasa miavaka izay tanàna tena madio
Raikitra ny fifaninanana tanàna madio, eo anivon’ny Boriborintany fahatelo. Mialoha ny hanatanterahana ilay tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa entina hanatsarana ny tanànan’Antananarivo no hanatontosa izany, mba hampisy lanja ny fotodrafitrasa mitsangana.
SESAME Ambatoroka Mpiasa 50 mahery nofanin’ny CNaPS
Nahazo fiofanana avy amin’ny CNaPS ireo mpiasa ao amin’ny « association SESAME » etsy amin’ny Campus UCM Ambatoroka. 50 mahery ireo mpiasa ao no nangataka te hahalala antsipirihany mikasika ny zon’izy ireo.
Fifandraisan’i Madagasikara sy Japon Hampiroborobo hatrany ny fampiasam-bola sy ny fandraharahana
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny alarobia 10 oktobra farany teo tetsy amin’ny masoivohon’i Japon eto Madagasikara teny Ivandry ny fametrahana ny rantsan’ny orinasa japoney Tokyo Sangyo any Toamasina.
Satroboninahitry ny mpanjaka very Tsy mbola misy mangirana ny fikarohana
Herinandro maro izay no lasa, nilazan’ny minisitry ny kolontsaina, Johasy Eleonore,